Abafundi abavela emhlabeni jikelele walidumisa inhlanganisela kancane amnyama umculo electronic kanye okusezingeni eliphezulu vocals zesifazane. Ngakho-ke, abantu abaningi banesithakazelo lapho wathwebula isiqeshana Faded (Alan Walker). Le vidiyo nje yashaya amashadi emhlabeni wonke. Cishe zonke iziteshi umculo lesi siqeshana langena phakathi kwabayishumi abaphasa ngamalengiso.
Ngo-2014, u-Alan Walker ukhiphe inguqulo yokuqala Fade izingoma, okuyinto lokhu kwakuhluke version osetshenziswa kuvidiyo, kwakungekho vocals besifazane futhi awukho umbhalo. Ngaphambi ungitshele lapho wathwebula isiqophi Faded (Alan Walker), asikhulume okuncane mayelana umbhalo, okuyinto yengezwe umculo. Wagcwalisa bese yengezwa ukwakheka, okwenza kube nakakhulu. Ingoma salokhu umculi isiqophi Norwegian wahlabelela Iselin Solheim.
Amagama ukungezwa umculo ngqo ukulandelana ividiyo, ngakho umbhalo indaba bheka organically. Ingoma kuyinto isikhalo lyrical nomuntu bekuyingxenye yendlela yakhe. Nakuba ukuhumusha amazwi Heroine kungaba ngezindlela ezahlukene: isikhalo edolobheni noma engasasetshenziswa. Yena akazi lapho ukhona nokuthi ngabe usaphila. isihloko sengoma lapha lingase lihunyushwe ngazo ngezindlela ezihlukahlukene: nokunyamalala, pomerknuvshaya, egqwalile noma abe buthakathaka. Yini igama kungaba lesifanele ngaphezulu, kuphuma kuwe ngemva kokubuka le video.
Yini lesi siqeshana
Uma unesithakazelo umbuzo lapho wathwebula isiqophi Faded (Alan Walker), khona-ke kungenzeka kakade ujwayelene ividiyo. He sa ukuba ikusasa post-ezibhubhisayo. I hero le vidiyo uya phakathi komuzi. Mhlawumbe, wayengumuntu abandayo, wagcina walamba noma womile. Ukukhuluma Atlantis ngaphambi kokuphela umbhalo isiqophi link. Abaningi bachitha Okubonwayo inhlangano nge izindawo ishiywe emhlabeni eChernobyl amandla enuzi. Yingakho labo abeza esilindele lesi sithombe esikrinini, uzibuze lapho wathwebula isiqophi Faded (Alan Walker). Okwakushiwo ngemva ukuhunyushwa kombhalo kuya kuba sobala futhi ezijulile. Ngemva kokulalela le ngoma ngokuhlanganyela ividiyo, kukhona okuthile ongakwazi cabanga.
Ngakho, indaba esitshela iqhawe ezinwabuzelayo umzana ishiywe beyofuna usithe. Abalandeli akholelwe ukuthi is efuna abasindile ngemva kwenhlekelele, ukudla noma amanzi. Ukuze iningi le video, ethi uhambela isakhiwo sishiywe, ebheka kubo. Ukucabanga inhlekelele kusikisela ukubukeka hero. Wayegqoka Udabuleleni izigqoko kanye ubuso bakhe embozwe imaski eyenziwe ndaba, kepha efaniswe ngomshini. Nakuba ngakolunye uhlangothi, hero ngokwanele eliphezulu ubhaka nophethiloli ithangi nge ithoshi ukuthi ungakhuluma mayelana uhambo olude.
Umthola endlini yayo, awunalutho futhi elahliwe, bazungeza bayiminqumo oluze, utshani omisiwe. On wonke, isithombe ibukeka impela ezicindezelayo, hero isebuhlungwini kulokho akubonayo. On omunye ozimele kungabonwa, ngokushesha nje endlini wabheka. Ngezinye kakhulu ekupheleni uhlamvu isiqophi ezama ukususa imaskhi.
Alan Walker, Faded: lapho wathwebula isiqeshana
Le vidiyo yathathwa ezindaweni eziningana. Ngokuvamile ukusho ukuthi wasusa izindlu ishiywe Tallinn, kodwa empeleni kuvidiyo kunendlela eyodwa kuphela ekwakhiweni kwaleli dolobha - ihholo ekhonsathini Linnahall. Singasho obonwa graffiti ezindongeni. Linnahall ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko sokudubula esihlatshiwe lingasetshenziswanga iminyaka 7, kusukela akekho owayefuna ukuthenga kakhulu enkulu endaweni into.
Lesi sivumelwano inhlolovo Rummu olwenziwa kumasayithi eziningana. Ekuqaleni ividiyo sibona udonga eziluhlaza ejele abalahliwe, etholakala kulendawo. Pond waphuphuma amakhaya - Rummu inkwali, futhi begxuma kusuka luhlaka isitebhisi udutshulwe kwenye yezindlu.
Esikhathini ivaliwe futhi washiywa isikhathi eside emzini Paldiski amatilosi badutshulwe izinhlobo futhi washiywa ujantshi tank izimoto, futhi le shot yokugcina sathathwa ogwini oLwandle iBaltic. Kule ndawo, eziningi ezakhiweni ezishiywe dengwane. I vidiyo ithole ezimbili graffiti ngamazwi athi "I Itheniphu" futhi "Dimas", bese ubheka indlu udinga Pakri nhlonhlo, budebuduze Paldiski.
Incazelo yaleli isiqophi
Lokhu isiqeshana aqashwe ngeso cishe zonke izakhamuzi zomphakathi Umhlaba 5, futhi ngamunye wenza ngakho imibono yabo siqu. Abantu abaningi bafuna ukwazi kahle lapho wathwebula isiqophi Faded (Alan Walker) kanye nencazelo yayo. Ngokuphathelene indaba nencazelo yalo kungashiwo ukuthi lapha wonke umuntu kufanele aqonde. Kwabanye, isiqeshana elifanekisela ukubuya kamuva endlini ababehlala kuyo ngenxa, okuyinto sesibe benganakiwe futhi balahlwa kokufa kwabathandekayo. Kwabanye, kuyinto samuntu kothando elahlekile kanye nemiphumela yalesi senzo.
Abalandeli ngokuvamile ukuhumusha isiqeshana ngokombono apocalypse, ukuthi yisibhicongo ezaholela ukungcoliswa insimu kanye kokufa kwabathandekayo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kuvidiyo kufihliwe umqondo global - Abantu ngokwabo kwaholela Inhlekelele yezindawo zemvelo futhi manje ngiyazisola emadolobheni wabhubhisa kanye nasezindaweni zasemakhaya.
Uhlamvu main kungenziwa waqonda ngetindlela letehlukene: njengoba umhambi, owayehlala ekhaya futhi ekugcineni wakwazi ukuthola indawo lapho akhulela khona. Ibhekwa kuphela owasinda emhlabeni, abasinde enhlekeleleni, njengoba ubufakazi ngokuvamile kuholele ozimele njengoba ibuyele ngokusebenzisa izindawo ishiywe befuna okuthile. Alan Walker, kukhona eminye imisebenzi ezithakazelisayo.
Club "Neo" - okungcono ebusuku isikhungo eMoscow
Granovskaya Nadezhda: A Biography of the omncane omnyama "Viagra"
Academy igor krutoy: vocal, nobuciko bokusina, wenza izingane. Academy of umculo ezidumile igor krutoy
. V. Ya Shainsky: Biography of umqambi wezingoma odumile
LCD "Semitsvet" - ibhizinisi-class izindlu ukuba siqonde induduzo
Indlela ukubuyisela izwi?
Injani ukwelashwa meningitis ubovu bese serous
Bookplate - kuyini? Bookplate: izithombe
Koryaksky: incazelo, umlando. Intaba-mlilo e eKamchatka
Indlela ukupheka ikhekhe ngendlela nautical isihloko?